कुर्कुचा फुटेर हैरान हुनुहुन्छ ? यो हो निको पार्ने विधि घरेलु बिधि ! – Chautari Online
November 12, 2020 1021
यदि तपाईको खुट्टाको कुर्कुच्चा फुटेको छ भने त्यसले तपाईंको चिन्ता बढाउँछ । यो समस्याबाट मुक्ति पाउनका लागि महिलाहरु विभिन्न उपायहरु अपनाउने गर्छन् । विभिन्न क्रिम र लोसन लगाउने गर्छन् । तर, त्यस्ता क्रिमले कुनै असर गर्दैन ।कुर्कुच्चा सफा गर्नुपर्छ:नुहाउँदा आफ्नो कुर्कुच्चालाई स्क्राबले सफा गर्नुपर्छ । त्यसो गर्दा मृत छाला र फोहोर निस्कन्छ । बाहिरबाट घर आइसकेपछि आफ्नो खुट्टालाई तातो पानीमा डुबाएर सफा गर्नुपर्छ ।
Prevतिहारको मुखमा ३ घरका एक्ला छोराहरुको मृत्यु, सोकमा डुब्यो परिवार
Nextबैदेशिक रोजगारिमा दैवले हात र खुट्टा चुʼडेर लग्यो, २ छोरीलाई काखमा च्यापेर चुहिने खरको छानो मुनी बाट बाबाले पिडा पोखे! (माʼर्मिक भिडियो सहित)
भदौ २२ गते सोमबार, यस्तो छ तपाईको राशिफल>>
गुण्डा नाइके ‘बले’सँग एक अर्बको अवैध सम्पत्ति उनी र श्रीमतीविरूद्ध २० करोड बिगो कायम गरी विशेष अदालतमा मुद्दा दायर